Creative Writing » အမှိုက်ကင်းစင် ကျောင်း မုန့်တန်းတစ်ခွင် – Junk food free school campaign	38
ဆရာ နန္ဒဝင်း ရဲ့ ပေ့(ချ) မှာ တွေ့လို့ရော အဲဒီ မတိုင်ခင် အင်ဒိုနီးရှား ဝန်ကြီးက သူတို့ ကျောင်းတွေမှာ နိုင်ငံခြားမုန့်၊ အသင့်စားမုန့်တွေကို ပိတ်ပင်ပြီး ရိုးရာ အစားအသောက်ကို ကလေးတွေကို ရောင်းချဖို့ ပြောတဲ့ သတင်းလေး ဖတ်ရာက စပြီး စဉ်းစားမိတာ။
ကာကွယ်ပေးရမည့်အနာဂတ်(သို့မဟုတ်) တန်ဖိုးသင့်နေ့လည်စာ (daily eleven ကိုပို့မယ့်ဆောင်းပါးလေးပါ)
ကျွန်တော့်အတွေးမွေးစားကြသူတွေထဲမှာ ရန်ကုန်မြို့ အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းက ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီးတစ်ယောက်လည်းပါဝင်လာပါတယ်။ သူတာဝန်ကျရာ ကျောင်းကလေးဟာ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်က ကျောင်းဆိုပေမယ့် လာရောက်ကျောင်းတက်နေကြတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများကတော့ လိုအပ်ချက်ရှိနေ သေးတဲ့မိသားစုဝင်ထဲကကလေးတွေများပါတယ်။
သီးစုံပဲဟင်းနှင့်ထမင်းနှင့်ဆိုနှစ်ရာ ကြက်ဥ တစ်လုံးပါ ထပ်ထည့်ချင်ရင်နောက်တစ်ရာ ထပ်ပေါင်းသုံးရာ သတ်မှတ်ကာ တန်ဖိုးသင့်နေ့လယ်စာ ဇွန်လ ကျောင်းဖွင့်ရက်နှင့်တပြေးညီ ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျက်စပဲရိုး says: ကျောင်းတက်တုန်းကတော့ အဲ့ဒီ မုန့်ဈေးတန်းတွေဟာ ဆရာ၊ဆရာမ တွေ အတွက် အပိုဝင်ငွေ ဒါမှမဟုတ် ဈေးသည်တွေကို ဈေးကောက်ကောက်ပြီး ကျောင်း/ဆရာများ ရန်ပုံငွေ ပဲဗျ။
ခင်ဇော် says: အေးပေါ့။
ဦးကျောက်ခဲ says: စာသင်ကျောင်းတွေမှာ Junk Food Free ဖြစ်သင့်တာကြာပြီ…
ခင်ဇော် says: ကျနော်ရောပဲ။
ဦးကျောက်ခဲ says: ဒီပို့စ်နဲ့စပ်မိလို့ပြောရရင်…
ပြောရဦးမယ် … အဲသည့် ဆိုင်စုတ်စုတ်လေးမှာ ဟင်းကျက်စ ၁၁-နာရီလောက်ဆို ကားကြီးကားကောင်းတွေနဲ့ ပါဆယ်လာဝယ်တဲ့သူတွေလည်း တန်းကို စီလို့… ခွိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ဟယ်။
အောင် မိုးသူ says: ဈေးသည်တွေကလည်း ပိုက်ဆံရဖို့သာသာ မြင်နေတော့တာ။ စေတနာဆိုတာ ထည့်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်က ရှားပါးလာပြီ။ အဲသည် ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးလို အများကြီးမဟုတ်တောင် အနည်းအကျဉ်း လုပ်ဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမယ်။
ခင်ဇော် says: ဆရာ ဆရာမ တွေ က စေတနာ အရင် ရှိရင် ဖြစ်မယ်ထင်။
kai says: ထမင်းတနှပ်.. ၁ဒေါ်လာ…
ခေါင်း.. ခေါင်း.. ဟေ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: တဂျီး ခေါင်း အရင် မဖြတ်ခင်
kai says: မြန်မာပြည်မယ်.. အ၀ါရောင်လူတန်းစားကို ကော်ပီကက်လုပ်ပြီးမှ အစိမ်းလူတန်းစားပေါ်လာတာမို့.. ဘိုချုပ်တွေကိုရှင်းချင်ရင် အ၀ါကိုအရင်စာရင်းရှင်းရမယ်လို့သာပြောချင်မိတယ်..။
နောက်တပါတ်နေ..သွေးစစ်ချက်လာယူဆိုတာမျိုးလုပ်နေနိုင်တဲ့.. အ၀ါလူတန်းစားဘယ်လောက်ရှိမယ်ထင်သလဲ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: အဲဒါတော့ ကိုယ်တွေ့မို့ မပြောတော့ပါဘူး တဂျီးရယ်။
ခင်ဇော် says: https://www.facebook.com/nanda.win.71/posts/691969670947002
kai says: ကမ္ဘာမှာ ဂျပန်က ပြာပုံဘ၀ကနေ ခုန်ထလာတာ.. အဲဒီကျောင်းတွင်းနေ့လည်စာကျွေးတဲ့စီမံချက်ကြောင်ပဲ..
Alinsett @ Maung Thura says: အင်း… ကောင်းကျိုးပြု စာစဉ်လေးပဲနော်…
လုပ်ငန်းစဉ်လေးပါ…အရာရောက်လာနိုင်ရင်ကောင်းမယ်… ဒါနဲ့… daily eleven ကို ပို့မယ့်ဆောင်းပါး… ပုံမနှိပ်ခင်.. ပျံ့သွားတာလား …
ခင်ဇော် says: မသိဘူး ဆက်ဆက်ရေ/
မြစပဲရိုး says: ဟိုးတစ်ခါ အဲဒီ ဆရာဝန် ရဲ့ တန်ဖိုးသင့်မှာဘဲ ထပ်ဝင်ဆွေးနွေးဖို့ဟာ လက်က မရိုက်ဖြစ်လိုက်တာ။
ဂျက်စပဲရိုး says: အဲလို ဆိုင်တွေကိုပဲ သင့်တင့်တဲ့ ဈေး နဲ့ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း အာဟာရ မှီမှီ နဲ့ ချက်ပြုတ်ေ၇ာင်းဖို့ ပညာပေးမယ် ဆိုရင်ကော။
kai says: ကမ္ဘာ့တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေတော်တော်များများကတော့.. ကလေးကျောင်းတွေမယ်.. စားသောက်ဆိုင်..ကင်န်တီး.. ပုဂ္ဂလိကတဦးချင်းစီကို.. အရေအတွက်များများနဲ့ပေးဖွင့်မယ်မထင်…။
ဂျက်စပဲရိုး says: သမှာတော့ ကျောင်းတွေမှာ food court တွေ fast food (McDonalds, Subway,…) တွေ ပေးဖွင့်သဗျ။
ခင်ဇော် says: ကျနော် တို့ဆီမယ် လိုနေတာ ဆုပေး ဒဏ်ပေး စံနစ်လားမသိ
တောင်ပေါ်သား says: အနော်တို့ အမ်အိုင်စီတီမှာ လာရောင်းရင်ကောင်းမယ်ဗျာ ၊
ဒီမှာ ပုံစားတစ်ပွဲ ၉၀၀ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: အာ။
တောင်ပေါ်သား says: သားသားက လူကြီးဟုတ်ဘူး by the way အဲ့ အစီစဉ် ဒီ့ထက် အောင်မြင်ပါစေ
Mike says: .လေးစားပါတယ်ဆရာမကြီး
ခင်ဇော် says: လေးးစားးစရာပဲ မိုက်မိုက်ရေ
​ဒေါ် လေး says: မိဘတွေကလည်း ကျောင်းမှာ ဈေးနှုန်း သက်သာပြီး
ခင်ဇော် says: တတိယ နေရာထားး စဉ်းးစားးခဲ့ရင်တောင်
Ma Ma says: စိတ်ကူးကို စတင်မွေးဖွာပေးတဲ့ ဆရာနန္ဒ၀င်းနဲ့
စစချင်းမှာ လုပ်နိုင်သလောက်နဲ့ လုပ်ရင်း တိုးချဲ့ရင်း တဖြေးဖြေးနဲ့ Junk food free school ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: အဲဒီ လို ပဲ အကောင်းးဘက် ကို ဦးးတည်စေချင်ပါတယ် ချစ်မရေ
Shwe Ei says: -ကျောင်းကန်တင်းဆိုတာ တက္ကသိုလ်နဲ့ဘဲ ဆိုင်သလိုဖစ်နေတာကိုက မဟုတ်သေးတာဗျ
ခင်ဇော် says: ကလေးတွေ ကို စိတ်မဝင်စား ပစ်ထားမိတာ ကြာပြီလားလို့ပါ။
မွသဲ ( 17082011 ) says: သားတို့ကျောင်းမှာတော့ တန်ဖိုးမသင့်ပေမဲ့ အာဟာရဖြစ်မဲ့အစာတွေပဲကျောင်းအုပ်ချုပ်သူတွေ ကြီးကြပ်မှု့နဲ့ရောင်းနေတာမို့ ထမင်းဘူးအဆင်မပြေတဲ့နေ့ စိတ်ချလက်ချပိုက်ဆံပေးလိုက်နိုင်တာစိတ်ချမ်းသာမိပါရဲ့။ တခြားကျောင်းဒေကိုလဲအိုက်လိုနီးပါးဖြစ်စေချင်မိတယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျန်းမာရေးး နဲ့ ညီတယ် ဆိုရင်ကို
မွသဲ ( 17082011 ) says: ကျောင်းအုပ်တွေက သားတို့ကန်တင်းကို မကြာမကြာဝင်စစ်တယ်။ သူတို့စိတ်ထဲမတွေ့တာနဲ့ အိုက်အစားအစာရောင်းခွင့်ပိတ်တာပဲ။ အရင်ကဆိုကျောင်းရှေ့ဈေးသည်မလာရမောင်းထုပ်တယ် ခုတော့မရတော့ဘူးဈေးသည်တွေကအတင်းပေကပ်ရောင်းတော့ လက်လျော့ထားပီး ကျောင်းတွင်းကန်တင်းကိုပဲတင်းကျပ်ထားတော့တယ်။ ထမင်းကောဟင်းကောရောင်းတော့ ထမင်းချိုင့်မပါလဲအဆင်ပြေတယ်
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟုတ်တယ်နော်… ကျောင်းဈေးမှာဆို လက်သုပ်စုံ.. ဇီးထုပ်… နေကြာစေ့…. ကန်စွန်းဥပြုတ် . အဲဒါမျိုးတွေပဲ ရတာ… ထမင်းချိုင့်မပါရင်တောင် ဝယ်စားစရာမရှိ… အခုကလေးတွေဆို ထမင်းတောင် မစားချင်ကြတော့ဘူး.. အားအားရှိ.. ကြက်အူချောင်းကြော်.. ဝက်အူချောင်းကြော်.. ဝက်သားပြား… အပြင်မုန့်.. အဲဒါတွေပဲ စားနေကြတာ… ခုလိုလေးလုပ်ပေးတဲ့ ဆရာမကြီးကို အရမ်းကျေးဇူးတင်မိတယ်… စကားအတင်းစပ်..အူးဆာရဲ့ ကလေးနှစ်ယောက် အရမ်းထွားတာကို အားကျတယ်လို့..
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရာသီစာထဲမှာ စားသင့် တဲ့အစာတွေလည်း အများကြီးပါ။